लेख > भविष्य > के हामी केहि हप्तामा बाँचिरहेका छौ?
तपाईंलाई थाहा छ सुसमाचार राम्रो समाचार हो। तर के तपाई वास्तवमै यसलाई राम्रो समाचार मान्नुहुन्छ? तपाईं धेरैलाई जस्तै, मेरो अधिकांश जीवनको लागि मलाई सिकाइएको छ कि हामी विगतका दिनमा बाँचिरहेका छौं। यसले मलाई एउटा विश्व दृश्य दियो जुन चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा हेरे जुन संसारको अन्त्य हुने छ जुन हामीलाई थाहा छ आज केहि छोटो वर्षहरूमा आउँछ। तर यदि मैले सोही अनुसार कार्य गरें भने, म महा संकष्टबाट बच्न सक्नेछु।
धन्यबाद, यो अब मेरो इसाई विश्वासको केन्द्रबिन्दु होईन वा परमेश्वरसँगको मेरो सम्बन्धको जग हो। तर जब तपाईले केहि लामो समय सम्म केहि विश्वास गर्नुहुन्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउन गाह्रो छ। यस प्रकारको विश्व दृश्य व्यसनी हुन सक्छ, त्यसैले तपाईं अन्त-समय घटनाहरूको विशेष व्याख्याको चश्माबाट हुने सबै चीज देख्नुहुन्छ। मैले सुनेको छु कि अन्तिम समयको अगमवाणीमा निर्धारण गरिएको व्यक्तिलाई हास्यवाचक अपोकाاہोलिक्स भनिएको छ।
हामी मध्ये धेरैजना त्यो टाढा जान सक्दैनौं। तर यस्तो मनोवृत्ति जसले हामीलाई थाहा छ कि निकट भविष्यमा जीवनको अन्त्य हुन्छ यसले मानिसहरूलाई वरपरका पीडा र कष्टहरू लेख्न र सोच्न लगाउँछ: के हो त? उनीहरू वरिपरिका सबै चीजहरूलाई निराशावादी दृष्टिकोणले हेर्छन् र चीजहरू सुधार गर्ने काममा भाग लिनेहरू भन्दा बढी दर्शक र सहज न्यायाधीश बन्छन्। केही भविष्यवाणी दुर्व्यसनी मानिससम्म पुग्ने मानवीय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्न को लागी जान्छन् किनकि तिनीहरू सोच्दछन् कि तिनीहरू अन्ततः अन्ततः कुनै तरिकामा ढिलाइ गर्न सक्दछन्। अरूले स्वास्थ्य र आफ्ना बच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्छन् र उनीहरूको वित्तको ख्याल राख्दैनन् किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको लागि योजना बनाउन भविष्य छैन।
यो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने तरिका होइन। उहाँले हामीलाई संसारमा ज्योति हुन बोलाउनुहुन्छ। दुःखको कुरा, केहि ईसाई बत्तीहरू प्रहरी हेलिकप्टरमा हेडलाइटहरू मिल्दोजुल्दो छ कि अपराधहरू पत्ता लगाउनको लागि छिमेकीहरूको गस्ती हो। येशू हामीलाई ज्योति बन्न चाहानुहुन्छ जुन हामी यस संसारलाई वरपरका मानिसहरूलाई अझ राम्रो स्थान बनाउन सहयोग गर्दछौं।
म तपाईलाई भिन्न परिप्रेक्ष्य दिन चाहान्छु। किन हामी विश्वास गर्दैनौं कि हामी अन्तिम केहि दिनको सट्टा पहिलो दिनमा बाँचिरहेका छौं?
जब येशू पुनरुत्थान हुनुभयो, सबै मानिसका लागि परिवर्तन भयो - उनीहरूलाई यो थाहा थियो कि थिएन। हाम्रो काम हाम्रो सक्दो राम्रो गर्नु हो ताकि मानिसहरूले थाहा पाउनेछन्। वर्तमान दुष्ट संसारले यो नबनाएसम्म हामी विरोधको सामना गर्छौं र कहिलेकाँही सतावटको पनि सामना गर्छौं। तर हामी अझै प्रारम्भिक दिनमा छौं। अगाडिको अनन्ततालाई ध्यानमा राख्दै, इसाईमतका यी दुई हजार वर्षहरू केवल आँखा झिम्काए।
तर उनले हामीलाई आशाको सुसमाचार दिए, जुन सुसमाचार सबै मानिसहरूलाई हरदम चिन्नु पर्छ। हामी नयाँ सृष्टिको पहिलो दिनमा बाँच्नको लागि विशेषाधिकार पाउँदछौं जुन येशु मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो।